Ikamelo ELINOMBHEDE OLALA ABANTU ABABILI - I-Airbnb
Ikamelo ELINOMBHEDE OLALA ABANTU ABABILI
Oricola, Abruzzo, i-Italy
Ikamelo e-i-bed and breakfast ibungazwe ngu-Carla
Ngingumeluleki ozimele wezokuvakasha nomphathi wephrojekthi nomhleli womshado wendawo. Ngihlala kule ndlu nenja yami, uGinger. Sinengadi enkulu, lapho ehlobo ngihlela khona i-BBQ nabangane. Indawo enhle yamadoda ebhizinisi nabantu abashadile abafuna indawo ekahle yokuphumula
Ikamelo lihlotshiswe kahle ukuze linikeze izivakashi zami induduzo. Indawo ekahle kakhulu yamadoda ebhizinisi okuxhumana kahle nenhloko-dolobha ngesikhathi esifanayo yindawo efanele yabantu abashadile abafuna ukuphumula nokuthula emaphandleni. Indawo efanele yomthandi wasemaphandleni. ungahamba ngezindiza e-M.Simbruini Regional Park, noma wenze ukuthenga e-Rome. Ukuxhumana okuhle ngemoto, ngomqeqeshi nangesitimela sedolobha elikhulu.
ubusuku obungu-7 e- Oricola
Indawo yami ihlanzeke impela, umoya ohlanzekile futhi uphumule yilokho ozoba nakho. Indlu yami iyindawo ekahle kakhulu yokuhlala ngesikhathi se-5° Concorso Internazionale di Pianoforte "Pietro Iadeluca"
Ungaxhumana nami noma nini lapho ufuna ngesikhathi sokuhlala kwakho endlini yami. Wamukelekile ekhaya lami, futhi ngithanda ngempela ukuthi uzizwe ukhululekile njengekhaya lakho.